Maamulada Galmudug iyo Jubbaland oo ka baxay Shirka ka socda magaalada Garowe – Kalfadhi
Maamulada Galmudug iyo Jubbaland oo ka baxay Shirka ka socda magaalada Garowe
May 11, 2019 Kalfadhi
Madaxweynayaasha maamul Gobaleedyada Jubbaland iyo Galmudug Axmed Ducaale Geelle, iyo Axmed Maxamed Islaam, ayaa ka baxay Shirka madaxda Dowladda Soomaaliya kuwa maamul Gobaleedyada oo muddo Todobaad ah ka socda magaalada Garowe ee xarunta maamulka Puntland.
Axmed Maxamed Islaam “Axmed Madoobe” Madaxweynaha Jubbaland ayaa dib ugu laabtay magaalada Kismaayo ee xarunta Gobalka Jubada Hoose kadib markii uu ka baxay Shirka sida ay sheegeyn xubno katirsan Wafdiga Jubbaland oo ka qayb galay Shirka Garowe, halka Madaxweynaha maamulka Galmudug uu soo saaray Warsaxaafadeed uu ku sheegay in uu Fashilmay Shirkii Garowe ee madaxda Soomaalida.
Galmudug Warsaxaafadeedka ay soo saartay waxay ku sheegtay in Dowladda Federaalka Soomaaliya ay hagal daacisay Shirka Garowe islamarkaana ay diiday in laga wadahadlo arimaha quseeya Ajendaha Shirka sida lagu sheegay Warsaxaafadeedka Galmudug.
“Galmudug waxay waqti badan gelisay mira-dhalka Shirka Garowe ha yeeshee Dowladda Federaalka Soomaaliya ayuu ka socon waayay Shirkaas oo diiday in laga hadlo Ajendiyaashii madlanaa ee doorashooyinka, Bartoolka iyo Dastuurka Soomaaliya” ayuu lagu yiri Warsaxaafadeedka Galmudug.
“Dowladda Soomaaliya waa aqoonsan waysay waana tixgelin waysay heshiiskii Galmudug iyo Maamulka Gobalada Dhexe iyo dastuurkii ay ku heshiiyeen” ayaa lagu yiri qoraalka Galmudug ka soo baxay.
Maamulka Galmudug waxay sidoo kale sheegeyn in Dowladda Soomaaliya ay diiday in laga hadlo Maqaamka magaalada Muqdisho oo ay soo jeediyeen maamul Gobaleedyada waxayna sheegeyn in ay Dowladda Ishortaagtay Maqaamka Muqdisho.
“Madxda Dowladda Soomaaliya waxay ishortaageen ka hadalka maqaamka Muqdisho oo ay soo jeediyeen madaxda Dowlad Gobaleedyada” ayaa lagu yiri qoraalka ka soo baxay Maamulka Galmudug.
“Haddaba maamulka Galmudug waxay cadeynayaan in Dowladda Federaalka Soomaaliya uu ka socon waayay Shirkaas mas’uulna ay ka tahay Fashilka Shirka” ayaa lagu yiri Warsaxaafadeedka ka soo baxay Maamulka Galmudug.
Xildhibaan katirsan Baarlamaanka Soomaaliland oo maanta Maxkamad la horgeeyay
Senator Abshir Bukhaari “Dad aan xeer lahayn waa xoolo aan xero lahayn”